mubvunzo ndege mapepa
2 Makore mashoma 3 apfuura #255 by Dariussssss
Ini kubvunza, tariro munhu anoziva kuti ...
default All, uye vazhinji payware ndege vane yakawanda mapepa, kufanana cheki mazita, bhuku kumhanya uye zvichingodaro. Ndiri kuedza kwemwedzi kuwana izvi nokuda Thomas Ruth A330 / 340, uye dzimwe ndege zhinji, asi vachiri hapana. Saka, anoita munhu unoziva kuti ariwana?
Thanks zvizhinji pachine.
2 Makore mashoma 3 apfuura - 2 Makore mashoma 3 apfuura #256 by Gh0stRider203
Zvakanaka, Ini dzinowanzotaura Wikipedia nokuda dzevashanyi dzichimhanya / kukwira.
Ndinovimba izvi zvinobatsira kuti vamwe ..
DZIMWEWO tarisa chii FSX anoti nokuda Max huni / zvakakomba-uremu pamusoro wikipedia, sezvo zviri ikoko kunoita kuti yakarurama. KANA FSX haasi chete izvozvo nyore chaizvo parumananzombe
Kugadzirisa kwekupedzisira: 2 makore emavhiki 3 akapfuura ne Gh0stRider203.
2 Makore mashoma 3 apfuura #257 by Dariussssss
Huru dambudziko uye kurwadziwa ..... ndirworwu, kana kubhururuka, kana iwe kusvika vne, kana mudanga kumhanya, iye IAS tepi anowana tsvuku. Kwete TR A330 / 340. Nokuda kuti, handina chiratidzo apo mudanga kumhanya chinhu ndechokuti, ndinogona chete zvokufungidzira. The kuongorora izvozvo nokuzvidzora haasi kupa kuti mashoko, kwete chete Ndakawana.
Ndakakwanisa Chicherai CLS A340 docs ... asi ini zvakakomba chokwadi kuti mumwe chete pamwe TR A340.
2 Makore mashoma 3 apfuura - 2 Makore mashoma 3 apfuura #258 by Gh0stRider203
zvakanaka nokutendeka ... ndinoenda nezvakataurwa ndinogona kuwana kuti shiri chaiye .....
rakadini 747 (zvisinei umwe), ndinowanzogumbukira kuita 245 pazasi 10K iri kukwira-panze, ipapo kuisa autothrottle kuti chero dzevashanyi nokukurumidza iri IAS, kwokupedzisira nzira Ndinowanzotaura kuita panguva 135 ias
mudanga nokukurumidza Zvamazvirokwazvo nyore kuwana panze! zviri aircraft.cfg faira
2 Makore mashoma 3 apfuura #259 by Dariussssss
Ariwana .... asi hapana nzira iri yakarurama.
Full ichibhabhamisa kungomira pakati pokushanda kwayo ichimhanya-120 kts ive Airbus a340-500?
2 Makore mashoma 3 apfuura #260 by Gh0stRider203
2 Makore mashoma 3 apfuura #261 by Gh0stRider203
zviri refu bara asi unoziva chii ... EDZA kuwana akabata airbus ... ona kana ravachanoita kukubatsira panze!
2 Makore mashoma 2 apfuura #306 by Dariussssss
Pashure kutsvaka akapoteredza Iwe Tube, ndakakwanisa kuwana dzimwe chinhu ..
A340-600, nzira kumhanya 160-170 kts, pamwe mudanga nokukurumidza zvaakarurama pazasi 160 kts, inova chimwe woow guru .... Ndosaka ndaiva kudaro zvakaoma nguva kunyika ichi. Maduku A340s ... kufungidzira yangu yakanakisisa, 5-10 kts yakaderera chaizvo, asi achiri zvikuru kutsanya.
2 Makore mashoma 2 apfuura #308 by Colonelwing
Description: A340-500,600 Limitation kubva FCOM
2 Makore mashoma 2 apfuura #312 by Dariussssss
Thanks zvizhinji murume. Ndakanga usingagoni kuwana kubva panzvimbo iyoyo, hapana nzira Ini kuenda kuchibhadhara. Asi, ndakakwanisa kuchera kunze kumwe. Zvisinei, mumwe mukuru, guru kuvonga. Handina kuziva gwaro iri zvachose.
Time chokusika peji: 0.249 mumasekonzi